Cinnamon 2.8.8 inowanikwa muLinux Mint 17.3 | Linux Vakapindwa muropa
Cinnamon 2.8.8 yave kuwanikwa muLinux Mint 17.3. Pazasi pechinyorwa tinokuratidza maitiro ekuiisa
Iyo Cinnamon dhesiki iri imwe yematafura anoratidza iyo Linux Mint inoshanda sisitimu. Kune vanoda desktop iyi isu tine nhau dzakanaka, inova iyo vhezheni 2.8.8 yeCinnamon yave kuwanikwa kurodha pasi uye kumisikidza muLinux Mint 17.3 "Pink".
Chokwadi chinyorwa chakanyanya kunaka kubva dzese idzi nhau dzave kukurumidza kuita uye kudzoreredza kweLinux Mint, iyo, sezvamunoziva, ichangobva kutambudzwa nekombuta pawebhusaiti yayo nemhedzisiro yakaipa.
Sezvatakataura munguva dzakapfuura, timu yeLinux Mint yakave nerubatsiro rwevanhu vazhinji munharaundaque Vakaita zvishoma zvavo kuvabatsira kupora kubva pakurwiswa uye nekuvandudza zvakanyanya kuchengetedzwa kwesystem yako uye webhusaiti yako
Mhedzisiro yanga iri iyoyo ivo vakatopora uye vachipa hondo uye zvinenge zvese zviri pasi pesimba. Humbowo ndewekuti Cinnamon 2.8.8 desktop inoshanda zvakakwana paLinux Mint 17.3, saka unogona kuikanda pese paunoda.
Kuti uiise pane yako Linux Mint 17.3, sIsu tinongofanirwa kutaipa unotevera kuraira mune yedu terminalWokutanga kuraira kuisa sinamoni uye wechipiri kuimutsiridza kana yatove kuiswa.
Kana iwe uine imwe yekushandisa senge Ubuntu, unogona zvakare kuisa Cinnamon 2.8.8, zvisinei, iwe uchafanirwa kuita mamwe matanho mashoma, senge kuwedzera iro rinoenderana repositi. Heino muenzaniso weUbuntu. Muchiitiko chekuva neimwe sisitimu yekushandisa ine apt maneja, senge Debian, zvingave zvakafanana kunze kwekuti panzvimbo pekuisa sudo pamberi pemirairo, isu tinofanirwa kutanga taisa "su" kuti ive superuser.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Cinnamon 2.8.8 inowanikwa muLinux Mint 17.3
joe dell akadaro
Pindura kuna joe dell